सुनको मुल्यमा भारि गिरावट, तोलाको कति पुग्यो ? - ramechhapkhabar.com
सुनको मुल्यमा भारि गिरावट, तोलाको कति पुग्यो ?
बुधबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ प्रतितोला ४०० रुपैयाँ र चाँदी पाँच रुपैयाँले घटेको हो ।
मंगलबार प्रतितोला ९१ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज बुधबार भने ९१ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार हुनेछ । सोही परिमाणको तेजावी सुन प्रतितोला ९१ हजार ४०० रुपैयाँ रहेकोमा आज ९१ हजार रहेको छ ।
यता, चाँदी भने प्रतितोला एक हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार हुनेछ । यसअघि एक हजार २०५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज घटेको महासंघले जनाएको छ ।
रुकुम पूर्वको मालपोत कार्यालयमा इन्टरनेट नचल्दा सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको छ । टाढा टाढाबाट सेवा लिन पुगेका सेवाग्राही होटलमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
एक दिनको काम हप्ता दिनसम्म नहुँदा खर्च बढेको उनीहरुको गुनासो छ । ‘यहाँ आएकाे ६ दिन भयो तर काम अझै भएको छैन’ सिस्ने गाउँपालिका वडा नम्बर ५ बाट आउनुभएका टिकाराम कार्कीले भन्नुभयो, ‘दिनभर कतै काम भइहाल्छ कि भनेर कार्यालयमा कुर्नेहरु धेरै छन् ।’